Vanyori veBritish vanoyera paBrexit | Zvazvino Zvinyorwa
Vanyori veBritish vanoyera Brexit
Chikumi 23 mhedzisiro yereferendamu yeBrexit, chinangwa chezvematongerwo enyika cheUK chekusiya EU, yakaguma ne52% yemavhoti vachitsigira kuzorora neEurozone, chokwadi chekuti mukuwedzera kusagutsa ruzhinji rwakavhotera kugara, rinotanga kuumba imwe mhosva pakati pevaya vakavhota vachida hongu, akabhabhatidzwa kare sa regexit.
Chiitiko chakachinjisa zvakare Internet uye pakati pemhedzisiro yacho isu tinowana kudyidzana kweavo vazhinji Vanyori veBritish vakayera paBrexit pamasocial network seTwitter, imwe yeanowanzozivikanwa epfupi asi akapinza pfungwa.
Mashiripiti munguva dzinonetsa
JK Rowling akataura nezvemashiripiti kugadzirisa dambudziko reBrexit kupera kwesvondo rapfuura apo Paula Hawkins, munyori weanotengesa zvakanyanya Musikana paChitima, akaramba achishanda kunyangwe asiri kunzwira tsitsi kuparara kweUnited Kingdom neEurozone.
Mienzaniso yekuti masocial network ave sei nzira dzepfungwa kubva pasirese, kusanganisira vamwe vanyori avo sevangwaru uye mamodheru kutenderera pasirese vasina kukwanisa kudzivisa kuratidza maonero avo nezveBrexit.
Rowling kana Hawkins akabatanidzwa nevamwe vazhinji vanyori vakaita saNeil Gaiman kana Salman Rushdie, vese vachida kuenderera muEU uye vachishora ramangwana rakachena reUnited Kingdom, hupfumi hwayo uye hongu, tsika dzayo futi.
Iyo gallery yemafungiro yakakura, ine simba uye inofungisisa.
Handifunge kuti ndakamboda mashiripiti zvakare. https://t.co/gVNQ0PYIMT
- JK Rowling (@jk_rowling) June 24, 2016
Kwete yekuzvifunga kana chero chinhu, asi Brexit chaizvo haina kukodzera kushanda. Tinogona here kugara muEU kuitira kuti ndipedze bhuku rangu?
- Paula Hawkins (@PaulaHWrites) June 26, 2016
Ndinotya kuti uchaida,
- Neil Gaiman (@neilhimself) June 24, 2016
Old Farts 1 Ramangwana 0. Waita zvakanaka England. Zvichida kurasikirwa kuIceland kunotevera & kubuda muEurope zvakanaka? https://t.co/ka5Qvm2ajU
- Salman Rushdie (@SalmanRushdie) June 24, 2016
Takatemwa nemusoro, saka takapfura tsoka yedu. Iye zvino hatichakwanise kufamba, uye tichiri nemusoro.
- Philip Pullman (@PhilipPullman) June 24, 2016
7am uye ndakamutswa kuenda kuUKIP ENGLAND. Handina kumbochema nyika yangu pamberi. Asi haisiri nyika yangu zvekare. Zvino isu tinofanirwa kuvaka Left nyowani
- JEANETTE WINTERSON (@Wintersonworld) June 24, 2016
Taura wega. Ndiri pro Indy Europhille ine maitiro epasirese uye vavariro dzekudyidzana. #Brexit https://t.co/u3Dw0t5Ffv
- Irvine Welsh (@IrvineWelsh) June 25, 2016
Izvi Vanyori veBritish vanoyera Brexit simbisa kuramba kwechizhinji cheUK kusiya EU.
Chimwe chinhu ndechekuti dzimwe sarudzo dzinogona kudzoserwa.
Iwe unofungei nezveBrexit?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori veBritish vanoyera Brexit
Iyo dystopian yeUkraine novel yakanyorwa paFacebook panguva yekuratidzira inoshandurwa muChirungu
Chii chichaitika izvozvi kuzvitoro zvemabhuku zvemuUK nemaraibhurari?